Food Cutting အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.4 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（103.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Food Cutting - Chopping Game
သင်တစ်ဦးအစားအစာကိုနှစ်သက်ပါသလား? သငျသညျကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါသလား? သငျသညျအမှုအရာဖြတ်တောက်နှင့်အလေးချိန်နဲ့တူပါသလား သငျသညျဤမေးခွန်းများကိုဖို့ "Yes" ပြန်ဖြေလျှင်, သင်တစ်ဦးဂိမ်း-ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူဖြစ်ရမည်!
ဖောက်သည်ပျော်ရွှင်စေနှင့်သင့်ရောင်းအားတိုးမြှင့်ဖို့လက်ျာအချိုးအစားအတွက်အစားအစာ Cut! ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့အသံရမယ်, ဒါပေမယ့်သင်လှည့်စားကြကုန်အံ့မထင်သော်လည်း, ကအချိန်များတွင်အတော်လေးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်! တစ်ဦးပွတ်ဆွဲသို့မဟုတ်ဓါးအသုံးပြုခြင်း, ပေးထားသောအလေးချိန်အညီအစားအစာများ၏အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အမှု၌သငျနေတဲ့မှားယွင်းတဲ့သည်စိတ်မရှည်ဖောက်သည်ရူးသွပ်စေသင့်ရဲ့အမှားပြင်ပေးနှင့်မသင့်ရဲ့အကြွင်းမဲ့အာဏာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေး!
အများအပြားရှိပါတယ် သငျသညျအနုစိတ်လုပ်ဂိမ်းမှတဆင့် upgrade နှင့်အစားအစာဖြတ်တောက်ခြင်းတာဝန်များကိုစိန်ခေါ်အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုအဆင့်ဆင့်! သင့်ရဲ့အာရုံကိုပွတ်နှင့်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နှင့်သင့်အလုပ်အတွက် bug တွေကို fix မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့
● Bug ပြုပြင်မှုများသင့်ရဲ့ bug တွေ Fix
ခရီးစဉ် https://lionstudios.cc/contact-us/ တစ်ဦးအဆင့်ကိုရိုက်နှက်သို့မဟုတ်သင်ကစားပွဲများတွင်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်ဆိုကြောက်မက်ဘွယ်စိတ်ကူးများရှိတယ်အပေါ်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်, လိုအပ်ကြောင်းအကူအညီရှိသည်!
https://lionstudios.cc/; သငျသညျမစ္စတာ Bullet, မင်္ဂလာ Glass ကို, မှင် Inc နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဘောလုံးဆောင်ခဲ့သော
ခေါင်းစဉ်အနိုင်ရရှိမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆုချီးမြှင့်အပေါ်သတင်းရရှိရန်နှင့် update လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါသည့်စတူဒီယိုထဲကနေ